Gaadiidka TCDD Co. ISKUR ayaa shaqaalaysiin doonta shaqaalaha! | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGaadiidka TCDD IŞKUR wuxuu shaqaaleysiin doonaa shaqaalaha!
Gaadiidka TCDD IŞKUR wuxuu shaqaaleysiin doonaa shaqaalaha!
09 / 10 / 2018 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, Shaqooyinka, GUUD, HAY'ADAHA, TURKEY, Gaadiidka TCDD
TCDD Transportation Co. 6 waxay shaqaaleysiin doontaa shaqaalaha. Codsiyada waxaa lagu sameyn doonaa ISTKUR. Shuruudaha lagu codsanayo qorista dadkii hore ee dambiilayaasha ah iyo shaqaalaha curyaamiinta ayaa lagu dhawaaqay.
TCDD ayaa ku dhawaaqday inay shaqaaleysiin doonto shaqaalaha si ay ula kulmaan baahida shaqaalaha gaadiidka. Qoraalku wuxuu shaqaaleysiin doonaa dhammaan dembiilayaasha hore iyo dadka naafada ah 6. Codsadayaashu waxay awoodi doonaan inay codsadaan iyada oo loo marayo IŞKUR. Dukumeentiyada loo baahan yahay iyo xaaladaha codsiga ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay.
Kadib dhammaystirka codsiyada iyada oo loo marayo qorista dambiyadii hore ee ISKUR, musharixiinta lagu magacaabay liiska kama dambaysta ah ayaa lagu wareysan doonaa 7 November oo ah Ankara Altındağ Waaxda Kheyraadka Shaqaalaha. Musharixiinta waxaa loo adeegsan doonaa sida ku cad qodobka Xeerka Shaqaalaha 4857. Muddada qorista, oo lagu sheegay inay tahay bilihii 4, ardaydu waxaa laga codsaday in ay ka qalinjabiyaan qaybaha la xiriira dugsiyada sare ee xirfadaha. Koronto yaqaan, dayactiraha mulkiilaha, shuruudaha dalabka iyo faahfaahinta kale ee shaqaaluhu u shaqeynayaan waaxyaha xirfadda waa sidan;
Shaqaalaha u shaqeeya shaqaalaha naafada ah, waxay ku shaqeeyaan gobollada Karabuk iyo Afyonkarahisar. Codsiyada qorista 2 waxaa lagu samayn doonaa IŞKUR. 18-19 Bishii Oktoobar, musharixiinta waxaa lagu weydiin doonaa inay soo gudbiyaan dukumentiyada liiska kama dambaysta ah. Muddada tijaabada ah ee 4 waxaa la siin doonaa codsadayaasha ku guuleysta imtixaanka afka. Sidaa awgeed, musharixiinta waxaa lagu shaqeyn doonaa shaqaalaha farsamooyinka farsamada farsamada 1 sannadkii hore ayaa la weydiiyey. Khibrada shaqada SSI oo muujinaysa muddada dukumiintiga laga codsanayo goobta shaqada.
ISKUR iyo TCDD Transportation Inc. Tren
TCDD ayaa shaqaaleysiinaysa shaqaale la'aantiis ISKUR
Ogeysiiska Iibsiga Shaqaalaha TCDD Waxaa lagu daabacay DPB
Gaadiidka TCDD 25 wuxuu shaqaaleysiin doonaa shaqaalaha
Shaqaalaha TCDD ee Gaadiidka Tiknoolajiyada Shaqaalaha ayaa la qori doonaa
Gaadiidka TCDD 353 si loo sameeyo Qorista Shaqaale ee Joogtada ah
Samsun Metropolitan-IŞKUR iyo Xarunta Waxbarashada Dadweynaha ee İlkadım Booqashadda Koorsada Vatman
Mashiinnada Marmaray ee fromKUR
Mareykanka oo u Qaada Cargo ilaa Afgaanistaan ​​isagoo sii maraya Kazakhstan
Qorista Shaqaalaha Shaqaalaha TCDD
Shaqaalaynta TCDD ee shaqaalihii hore ee la xukumay
Shaqaalaynta shaqaalaha TCDD